Jikọtara Ikuku Ijikwa Units factory na suppliers | Ikuku
Kwụ Flow Ihicha Bench
Kọmputa mkpọchi Pass Boxes
Siri Ngalaba Design nke AHU Case;
Iduzi teknụzụ na-eduzi ikpo ọkụ;
Aluminom Allay Okpokoro & Naịlọn Cold Bridge;
Panels Skin abụọ;
Mgbanwe ngwa nwere;
Nnukwu arụmọrụ na-ekpo ọkụ / kpo oku mmiri;
Otutu nzacha nzacha;
Elu àgwà ofufe;
Nlekọta ka mma.
Uche nke HJK-E usoro jikọtara ikuku na-ejikwa ikuku, kwekọrọ na GB / T 14294-2008 National Standards na-agbasosi ike, ma na-eme ka R&D na mmelite miri emi oge, guzosie ike na-eduga uru na Okpomọkụ Iweghachite Technology. Ọgbọ ọhụrụ nke Holtop nke "U" Series Air Ijikwa Unit, agabigaghị ụkpụrụ nkịtị n'ọtụtụ njirimara njirimara.
Edere nke AHU Case: Kpamkpam 61 ụdị nke Standard Nkebi Design nke AHU Case, dakọtara na ọzọ akọwapụtara ikuku olu ina. Ka ọ dịgodị, iji imeghari dị iche iche ikuku olu ruru n'etiti ọkọnọ ikuku & iyuzucha ikuku maka dị iche iche ngwa chọrọ, Holtop na-eme ka ndị ọzọ deformation Nkebi imewe ya, na-ekwe nkwa na AHU arụmọrụ, na-eme kọmpat AHU size n'otu oge, ịzọpụta na-eri & oghere ime ụlọ igwe.
Modkpụrụ modulDesign: ptmepụta usoro modulu, 1M = 100mm. Module imewe na-eme ka AHU dị ka kọmpat dị ka omume, ugbu ọ na-eme imewe na n'ichepụta adaba & tozuru etozu.
Iduzi Core Technology nke Okpomọkụ Iweghachite: HJK-E Series AHU, nwere ike ịkwado ya na ụdị okpomọkụ dị iche iche. Rotary okpomọkụ Exchanger bụ kọmpat & obosara airflow ngwa. Efere okpomọkụ Exchanger bụ ala na-akwụ ụgwọ na kwesịrị ekwesị mgbake ruru. Okpomọkụ anwụrụ okpomọkụ Exchanger dị mfe ịnọgide na-enwe na itinye n'ọtụtụ ebe; Glycol mgbasa okpomọkụ Exchanger nwere efu cross ofufe & elu ina-ehicha larịị. Dị iche iche okpomọkụ mgbake ụdịdị nwere ike igbo dị iche iche ike ịzọpụta choro.
Aluminom Allay Framework & naịlọn Cold Bridge: ịmụta ike dị elu sọrọ mejupụtara aluminum alloy kpuchie, n'ibu ike ruo D2 ọkwa. Cold Bridge ebipụ imewe na enwekwukwa PA66GF mkpuchi warara, oyi akwa ihe na-akpata ruo TB2 ọkwa. Ka ọ dị ugbu a, ihe eji emepụta ọhụụ ọhụụ nke ikuku ọhụụ <1%, na-eme ka usoro ikuku ikuku dị ọcha.
Mpempe akwụkwọ DoubleSkin: Ọdịdị panel "Sanwichi", na 25mm & 50mm nkọwa abụọ. Mpụga akpụkpọ bụ Agba Steel mpempe akwụkwọ nke na-acha ọcha na agba kenha aluminum alloy kpuchie. Akpụkpọ anụ ahụ bụ mpempe akwụkwọ ígwè, akwụkwọ nchara igwe anaghị ahọrọ iji mejupụta ngwa ngwa pụrụ iche. Pu foaming mkpuchi ihe na-enye ihe kacha mma thermal mkpuchi onwunwe. A na-emechi oghere na ogwe osisi ahụ, ime dị n'ime ya dị mma ma dị ọcha.
A na-enweta ngwa ndị na-agbanwe agbanwe: VP & Oriọna Mgbochi maka Servicezọ Ọrụ bụ nhọrọ, mgbanwe mgbali ma ọ bụ mita nrụgide dị iche maka nzacha bụ nhọrọ, oke. Ntinye ụgbọ elu ma ọ bụ ntaneti nke ejiri mmiri mechiri emechi bụ nhọrọ. Ọtụtụ ngwa dị.
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ / kpo oku na-ekpo ọkụ: A na-eme nchọpụta mmiri Holtop na-emepụtaghị onwe ha ma mepụta, nke a na-eji ọla kọpa ọla kọpa mee nke ọma, site na teknụzụ pụrụ iche na-agbasawanye maka njikọta zuru oke, yana arụmọrụ na-enyefe ọkụ ọkụ. Mgbe eriri igwe ahụ gachara, enwere ike ịmịnye ndị na-ewepu mmiri PVC ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara. Enwere ike idozi trandị condensate iji hụ na agbapụta condensate n'oge.
Otutu ihe nzacha: HJK-E usoro nke igwe na-enye nchikota nke nzacha na nzacha nke nkọwa di iche iche iji gboo mkpa nke onye ọrụ maka ikuku dị ọcha dị iche. Ndị nzacha na-adịghị mma nwere ike izute ihe niile gbasara usoro ventilashị, usoro nzacha ahụ nwere ike izute izugbe nhicha chọrọ nke ventilashion. Ihe nzacha pụrụ iche nke PM2.5 bụ nhọrọ, ikuku ndụ adịghịzi anya. Na mgbakwunye, nzacha pụrụ iche maka ịsachasị kọmputa na ngwa ndị ọzọ dịkwa.
Elu àgwà fan ： A dịgasị iche iche nke elu-edu fansare nhọrọ, gụnyere kpọmkwem draịva abụọ mmiri centrifugal ofufe, abụọ mmiri na-atụ / azụ centrifugal ofufe, nkwụnye fan, EC ofufe na na. Fan tinyekwa na Flange bụ adụ ejikọrọ. Ihe ndị na-eme ka ujo dị n'etiti onye ofufe na isi nwere ike ikewapụ ịma jijiji nke ọma.
Mgbakwunye ndozi ： unitlọ ọrụ ahụ na-eji ọtụtụ akụkụ dị iche iche eme ihe, nke nwere ike ịdị mfe A haziri unit ahụ yana ọnụ ụzọ nnweta dị mkpa ma nwee ike ịnwe windo nyocha na ọkụ ọkụ ọkụ iji kwado mmezi. Unit panel nwere ike wepụrụ si n'èzí, mfe ebukọtala. A na-eji okpu eji achọ mma chọọ ogwe aka, oghere ntu agaghị emetụta ọdịdị nke otu.
Nke gara aga: Okpomọkụ Iweghachite Ikuku Ijikwa Units
Industrial Okpomọkụ Iweghachite Air Ijikwa Units
Okpomọkụ mgbake DX eriri igwe Ikuku Ijikwa Units
Industrial Jikọtara Air Ijikwa Units